घर फुटबल प्रबन्धक क्वेक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
LB उपनाम एक फुटबल प्रबन्धकको कहानी प्रस्तुत "एल मास्ट्रो“। यो क्विक सेटीन बचपन कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य (पत्नी, बच्चाहरू), आमा बुबा, प्रारम्भिक जीवन, र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज हो जुन उहाँ हुनुहुन्थ्योकै क्षणबाट नै हो। शून्य जब उनी बने नायक। तल क्विक सेटीनको प्रारम्भिक जीवन र उसको बारेमा कथा बताउने अन्य फोटोहरूको दुर्लभ छवि छ।
क्वेक सेतीन प्रारम्भिक जीवन र अनटल्ड लाइफ स्टोरीमा दुर्लभ छविहरू। क्रेडिट्स: ट्विटर, पिकुकी र मर्सिया प्लाजा
हो, सबैलाई प्रबन्धकfथाहा छरोम क्यान्ट्याब्रिया परिवार मूल को मास्टर छ "टिकी-टाका or Tiqui-Taca", एउटा कारण उसले अन्तर्वार्ता जित्यो किन एक एफसी बार्का प्रमुख कोच हुन। जहाँसम्म, केवल एक हातले केहि हाम्रो संस्करण विचार गर्दछ क्वेक सेटीनको जीवनी जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं.
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरुवातबाट, क्वेक सेटीनका आमा-बुबाले उनको जन्म पछि उहाँलाई नाम दिए "Enrique Setién सौर"र लोकप्रिय छैन"Quique Setién" तिमीलाई थाहा छ। स्पेनिश प्रबन्धक १ September September27 सेप्टेम्बरको २ 1958 तारिख उनको आमाको, स्पेनको सान्तान्दर, उत्तरी स्पेनको शहरमा जन्म भएको थियो। तल स्यान्टेन्डरको सुन्दर दृश्य छ- जहाँ क्विक सेटीनको परिवार आयो।
स्यान्टेन्डरको सुन्दर दृश्य जो क्विक सेटीनको परिवारबाट आएको हो। क्रेडिट: विकिपेडिया
सान्तांदर एउटा बन्दरगाह शहर हो जुन बिलबाओको पश्चिममा अवस्थित छ र युरोपियन समुद्री खानाको लागि डिपोको रूपमा प्रसिद्ध छ। क्विक सेतीनको परिवार शहरको सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबल केन्द्रक परिवारहरूमाझ भनिन्छ।
Quique Setién मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा उहाँका दुई भाइ र बुबाआमासँग हुर्किए। तपाईंलाई थाँहा थियो?… क्वेक सेतीनका आमाबुवा मध्ये एक (उसको आमा) उनले आफ्नो जीवन गुमाउनुपर्‍यो जब उहाँ सानो बालक हुनुहुन्थ्यो। कुनै बच्चा जो आमा गुमाउँदा गुज्र्यो भनेर पनि उसलाई गहिरो भावनात्मक पीडा र हानिकारक मनोवैज्ञानिक नतिजाको बारेमा थाहा हुन्छ। दुःखको कुरा, FC बार्सिलोनाका व्यवस्थापकले बच्चाको रूपमा देखा परेको यो नै थियो।
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
अभिभावकको हानी भएपछि अगाडि बढ्दै: आफ्नो बुवा र भाइहरूसँग परिवारको घर बगैंचामा फुटबल खेल्दा क्विक सेटीनको आफ्नै स्रोत बन्न पुग्यो कि उहाँ आमाको गुमाउनु परेको वास्तविकताबाट टाढा हुनुहुन्छ।
ऊ सानो छँदादेखि नै फुटबल खेल्नु उसको जीवनको मुख्य अर्थ रहन्छ। Asides फुटबल, क्विक सेटीनले पनि आफ्नो बुवाको सहयोगमा शतरंज खेल्न सिक्यो। समय बित्दै जाँदा, tऊ फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्न कोसिस अधिक तार्किक भयो र चेसमा प्रबल भयो। फुटबल शिक्षाको खोजीले उनका बुवाले उपलब्ध फुटबल परीक्षणहरूको लागि भर्ना गरिरहेको देखे।
जुलाई १ 1972 XNUMX२ को आसपास, मध्यमा शीत युद्ध, क्विक सेटीन पहिले नै एसडीको साथ भर्ना गरिसकेका थिए क्यासब्लांका। केही समय पछि, उहाँ आफ्नो शहरको अर्को स्थानीय क्लब, पेरीन्समा प्रगति गर्नुभयो। त्यस पछि, उसको खेल्ने क्षमता सीमित थियो किनभने ऊसँग कुनै विशेष प्रतिभा थिएन। क्युक सेतीन फुटबलको साथ उनको शुरुआती दिनहरूमा अझै शतरंजमा उनको लत नियन्त्रण गर्न सकेन। उसले दुबै खेलकुद बिचमा जग बसाल्ने निर्णय गरे। धन्यबाद, उनले दुबैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। अनुभवको बारेमा बोल्दै, उनले एक पटक भने;
“यद्यपि म फुटबल र चेसको बारेमा धेरै उत्साहित थिएँ। मलाई थाहा थियो चेसमा प्रगति गर्न मलाई धेरै प्रयास गर्नुपर्‍यो। साथै, मसँग फुटबलको पनि धेरै समय थिएन।
कहिलेकाँही जब म रातमा उठ्थें, खेल अघि, एक शतरंज वा अर्कोको सोचमा। मैले धेरै घण्टा शतरंज खेलेको थिएँ जुन फुटबलको साथ जागीर गर्दै थियो ”
चेस र फुटबल बीचको जुगाडमा सान्त्वनाको अभाव नै मुख्य कारण यो थियो कि सेतीन आफ्नो एकेडेमीको समयमा एक औसत खेलाडी थिए। किनभने क्विक सेतिनका बाबुआमा त्यति धनी थिएनन्, त्यसैले उनले रोजगार लिने निर्णय गरे। उनले १ 14 वर्षको उमेरमा फार्मासिष्ट कलेज र स्याटान्डरमा काम गर्न थाले। बहु प्रतिभाशाली बच्चा काम, फुटबल र चेस खेल्दै अधिक आराम तरिकामा। उनले यी गतिविधिका बीचमा जाल हालेर आफैंलाई एकेडेमी स्नातक प्राप्त गरे।
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - क्यारियर जीवन
सेतीनले १ 1977 XNUMX मा ला लिगा पदार्पण गर्दै गृहनगर क्लब रेसि Sant सान्तेन्डरको साथ आफ्नो खेल क्यारियर शुरू गरे। उनी गोल्यत केन्द्रिय मिडफिल्डर थिए जसको गोलका लागि ठूलो आँखा थियो। प्रारम्भमा, सेतीनले आफ्ना मूर्तिहरूको प्रशंसा गरे; पेल र Johan Cruyff जो त्यस समयमा एफसी बार्सिलोनाको लागि खेलाइएको पौराणिक कथा बन्यो। तल चित्रित, उनी क्लबको साथ कप्तान बन्न साधारण खेलाडीबाट उठे।
रेसि Sant स्यानट्यान्डरसँग खेल्ने दिनमा सेतीनको दुर्लभ फोटो। उनी एक खेलाडीबाट कप्तान र क्लबको लिजेन्डमा उदाए। छवि क्रेडिट: FCBarcelona
उनको चेस ज्ञानको उपयोग गरेर, क्वेक सेटियन प्रतिलिपि गरियो क्रिफको रणनीतिक दिमाग कुल फुटबल र फ्लुइड प्रणाली खेल शैली। १ style 1985 देखि १ 19885बीच एथलेटिको म्याड्रिडका लागि खेल्ने क्रममा यो शैली धेरै प्रस्ट भएको थियो जहाँ उनले आफ्नो टीमलाई स्पेनिश सुपर कप जित्न मद्दत गरे। तल चित्रण गरिएको, क्विक सेटियन फुटबल खेले जस्तो चेस थियो। उनले बार्सिलोना जस्ता ठूला विरोधीहरूका विरुद्ध पनि खेल राम्रोसँग पढे। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... Setién उनको खेल क्यारियरको समयमा FC बार्सिलोना विरुद्ध XNUMX जीत भयो।
Setien को एक दुर्लभ फोटो जब उसले खेलको समयमा एफसी बार्सिलोनालाई सताए। छवि: todocoleccion
क्वेक सेटियनको ड्राइभ र अठोट भनेको उसको खेल खेल्ने दिनहरूमा सर्वाधिक मूल्यवान सम्पत्ति हो। जो उसलाई पछि फिर्ता चिन्थे उनी भन्छन् कि उसको खेल शैली शैली को ए को सुन्दरता संगम गर्छ रोल्स रॉयस एक को ईन्जिन संग Mustang। मिडफील्ड प्लेमेकरले different times पटक scored विभिन्न क्लबमा रन बनाए पछि अन्ततः वर्ष १ 955in मा उनको बुटहरू फ्याँक्नु अघि
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सडकको प्रसिद्धि
सेवानिवृत्ति पछि पनि, क्यान्टाब्रियन साँचो प्रेमिका हुन छोडे जोहान क्रुफको खेल दर्शन। उसले एक पटक बार्सिलोना मुनि खेलको पछि सबैको लागि कसरी परिवर्तन भयो भनेर प्रकट गर्दछ Johan Cruyff जो क्लबको तत्कालीन प्रबन्धक थिए। कोच बन्नको लागि उनले आफ्नो दिमाग बनाउँदा यो उपलब्धिमा उनले उनको मूर्तिको पाइला टेकेका थिए।
सेतीनको कोचिंग क्यारियर उनको परिवार क्लब रेसि withबाट शुरू भयो जब उनी साथी सेगुंडा डिभिजन पक्ष पोलीडेपोर्टिभो इजिडोमा सर्नु भन्दा पहिले। वाइल्डर कोचिंग अनुभव प्राप्त गर्न, उनी मध्य अफ्रिका गए जहाँ उनी इक्वेटोरियल गुयनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धक बने।
अनुभवी सेतीनको लागि पहिलो ब्रेक अन्ततः लुगोसँग भयो जहाँ उनले उनीहरूलाई सेगुंडा डिभिजनमा निर्देशित गरे। त्यो सफलताले उसले लास पाल्मासमा भाडामा लिएको देख्यो - अर्को क्लबले उसले उनीहरूको लालिगा अस्तित्वमा सहयोग पुर्‍यायो। फेरि, रियल बेटिसले उनको सफलतालाई ध्यान दिए र उनलाई उनको व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्त गरे। क्लबले लास पाल्मास बोर्डसँगको उसको बहसको फाइदा उठायो, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले क्लब (बेटिस) छोडे।
रियल बेटिसमा हुँदा सेतीनले आफ्नो चेसको बाउन्ड-लाई पूर्ण रूपमा लागू गर्‍यो। कुल फुटबल र फ्लुइड प्रणाली प्रबन्धन को शैली मुख्य रूपमा ठूला विपक्षीहरूका विरुद्ध। त्यस्तै एफसी बार्सिलोना बाउन्डो टेक्निकले उनलाई बल रेजिष्टर्ड possession 54%, .56.9 55.9..62.5%, .2015 2019..XNUMX% र .XNUMX२..XNUMX% (क्रमशः २०१ to देखि २०१ from सम्म) को सब भन्दा बढी सेयर रहेको देख्यो।
भोका कोचको हैसियतमा सेतिन बारियाको बिरूद्ध खेल्नको निम्ति सधैँ पर्खिरहन्थे। उसले सात पटक हारे पनि, उनले एकल क्याम्प नो जीतको लागि पर्खे, जुन एक शानदार तरिकामा आएको थियो।
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
हेर्नुहोस्, नोभेम्बर २०१ in मा, क्वेक सेटीनले भल्भर्डेका पुरुषहरूलाई क्याम्प नोमा 2018--4 ले जित्यो। यो एक शानदार विजय हो जसले एफसी बार्सिलोनाका खेलाडीहरू सेतीनको गर्व गर्‍यो। त्यहाँ दावीहरू थिए कि क्विक सेटीनले चेसको सहयोगमा क्याम्प नोउमा एफसी बार्सिलोनालाई हराए।
त्यहाँ दावीहरू थिए कि क्विक सेटीनले चेसको सहयोगमा क्याम्प नोउमा एफसी बार्सिलोनालाई हराए। क्रेडिट: LaLiga
तपाईंलाई थाँहा थियो?… सेटिएनले सेर्जिओ बुसकेट्सबाट पनि बार्का मिडफिल्डर लेखनको साथ हस्ताक्षर शर्ट प्राप्त गरे:
"फुटबलमा हेर्ने तपाईंको तरिकाको लागि प्रेम र प्रशंसाको साथ क्वेकको लागि। शुभकामना।"
यो एक जीत हो कि उसलाई उनको विनम्र सीभी निर्माण गर्न मद्दत गर्‍यो जसले जनवरी २०१ 2019 देखि एफसी बार्सिलोनालाई आकर्षित गर्न सुरु गर्यो। २०१/2018/२०१ season सत्रको अन्त्यमा, सेतीनले बलिसलाई बल दर्ता गरिएको सबैभन्दा बढी सेयर (बल कब्जा) को सर्तमा बेडिसलाई म्याड्रिडभन्दा माथि दोस्रो स्थानमा पुग्न मद्दत गरे। बेटिसको साथ यो meteoric वृद्धि हासिल गरिसकेपछि, एफसी बार्सिलोनाले उसलाई रोक्न सकेन, त्यसैले सही पलको लागि पर्खन Ernesto Valverde.
१ January जनवरी २०२० मा, वाल्भर्डेलाई एफसी बार्सिलोनाले erc-२ ले पराजय गरेपछि सुपरकोपा डे एस्पानामा एटेल्टिको म्याड्रिडलाई हरायो। अपेक्षित रूपमा, सेतीनलाई त्यो दिन बार्सिलोनाको मुख्य कोच नियुक्त गरियो Ernesto Valverde उनको बर्खास्त पछि। पूर्व बेटिस मानिस नम्रता र चरित्रको साथ आइपुगे, एक व्यक्ति जसले सँधै उसको जीवनभर साथ गर्यो। युएफाका अनुसार सेतीनले उनको नियुक्ति पछि भनेका थिए;
हिजो म मेरो गाउँमा गाईहरूसँग बाहिर हिंड्दै थिएँ र आज म संसारको सर्वश्रेष्ठ खेलाडीहरू कोचिंग गर्दैछु! म सकेजति सबै जित्न चाहन्छु। यस क्लबले प्रत्येक बर्ष राम्रो हुने र उनीहरूले सकेसम्म धेरै ट्राफीहरू संकलन गर्न र राम्रोसँग खेल्ने माग गर्दछ। "
धेरै प्रशंसकहरू आशा गर्छन् कि उनी स्यान्टियागो सोलारी जस्ता समाप्त हुँदैनन्, केवल समयले मात्र बताउँदछ कि ऊ कसरी यो जटिल स्थिति र जिम्मेवारीले भरिएको छ। लक्ष्य अनुसार, लिओनेल मेस्सी पक्कै 'हुनेछराजा ' चेस-जुनूनी क्वेक Setien को लागी।
मेस्सी शतरंज - जुनसुकै क्विक सेटीनको लागि चेस किंग हुन सक्दछ। क्रेडिट: गोल र फेसबुक
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सम्बन्ध तथ्य
उनको ख्याति र एफसी बार्सिलोना कोच बन्न को साथ, यो निश्चित छ कि क्विक Seti pn एक प्रेमिका छ वा यदि उनी एक विवाहित मानिस हो भने फुटबल प्रशंसक चिन्तित हुनु पर्छ। त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्ने छैन जुन उसको सफल मानिस भएकोले उसलाई छेउमा एक महिला (प्रेमिका वा श्रीमती) बनाउने छैन।
सत्य यो हो कि क्विक सेटिéन एक पूर्ण परिवारका मानिस हुन्। क्विक सेतीनको पत्नीको नाम रोजा मन्जनेरा हो र उनी आफ्नो पतिसँग यस्तै स्पेनिश परिवार पृष्ठभूमिमा छिन्। दुबै प्रेमीका दुई बच्चा छन्। लारो जो २ ((जनवरी २०१ 24 को रूपमा) र सानो सोफिया जो लगभग ११ (जनवरी २०२० को रूपमा) हो। तल क्विक सेटीनको श्रीमती, उनको जेठो छोरो लारो र परिवारको बच्चा सोफियाको प्यारो फोटो छ।
Sequen Setien परिवार सदस्यहरू भेट्नुहोस्। उनको सुन्दर पत्नी (रोजा मन्जनेरा), छोरा (लारो) र छोरी (सोफिया)। क्रेडिट: Picuki
क्विक सेटीन आफ्नी पत्नी लगायत उनीहरुका छोरा लारोमा एक फुटबलर भएकोमा धन्यका हुन्। उसको बुवा जस्तै, लारो पनि एक मिडफिल्डर हो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… लारोले आफ्नो पारिवारिक वंशमा तेस्रो पुस्ताका पेशेवर खेलाडीहरूको अवतार लिन्छ। उनका बुवा र आमा बुवा दुबै फुटबल खेलाडीहरू थिए। लारोका मामा हजुरआमा, जोसे एन्टोनियो लोजानोले १ 1960 s० को दशकमा फुटबल खेलेका थिए। यो कुरा भन्न सम्भव छ कि क्विक सेटीनकी श्रीमती आफ्नो बुबाको लागि उनको जीवनमा आयो जसले सायद तिनीहरूलाई जोड्यो।
त्यहाँ एक राम्रो बुबा-छोरा बांड साझा छ क्विक सेटीन र उनको छोरो। उनका बुवालाई थाहा छ कि एफसी बार्सिलोना काम पाउनुहुनेछ, लरोले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे EU सन्त Andreu, सन्त Andreu को जिल्ला मा बार्सिलोना शहर मा आधारित एक स्पेनिश फुटबल टीम। यो निर्णय आफ्ना आमाबुबाको नजिक रहनको लागि आएको हो, विशेष गरी आफ्नो बुवाको।
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - व्यक्तिगत जीवन
पिच बाहिर उसको व्यक्तित्व को सम्बन्ध मा, यो सोध्नु उचित छ; क्विक सेटीन को हो? ... अब अनुसार खेलकुद, अनुभवी प्रबन्धक त्यस्तो हो जो फुटबलको कर्तव्यहरू पछि शतरंज खेल्न आफ्नो समयको एक ठूलो हिस्सा खर्च गर्दछ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… क्वेक Setien को लागी परिचित छ भूतपूर्व चेसियन च्याम्पियन अनातोली कर्पोभ (तल चित्रमा) र ग्यारी कास्परोभको बिरूद्ध खेलेका थिए, यद्यपि उनीहरूको बैठकको नतीजा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
क्वेक सेतीनले एकपटक चेस खेलेका थिए पूर्व चेस विश्व च्याम्पियन अनातोली कार्पोभको बिरूद्ध। क्रेडिट: क्लारिन
क्वेक सेतीनका परिवारका सदस्यहरू र शतरंजको लागि उनीहरूको प्रेम १ 1972 XNUMX२ को हो। प्रशंसकहरूले उनको कडा आईक्यू र प्रबन्धकीय बुद्धिमत्तालाई शतरंज कौशलमा जोड्नको लागि श्रेय दिएका छन्।
क्वेक सेतीन व्यक्तिगत जीवनको सम्बन्धमा जान्नु पर्ने दोस्रो तथ्य यो हो कि उहाँ बच्चाहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। सुपर बुबाले तल साना बच्चाहरूको लागि अभिभावकको भूमिका पूरा गर्दै।
क्वेक सेतीन निजी जीवन चिन्ने - उहाँ साना बच्चाहरू संग फुटबल खेल्न मन पराउनुहुन्छ। क्रेडिट: MurciaPlaza
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक जीवन
क्विक सेतिनकी श्रीमती मुर्सियाका स्थानीय हुन्। रोजा मञ्जनेरा हो एक निःस्वार्थ व्यक्ति जसले आफ्नो श्रीमान्को लागि भावनात्मक सहयोग प्रदान बाहेक अरु केही गर्दैन, तपाईको मतलब फुटबलको धेरै शौक नभए पनि उसको जीवनलाई समेट्नु हो। धेरैजसो प्रबन्धकहरू जस्तै, क्विक सेटियनकी श्रीमतीले उनलाई सबै फुटबल साहसिक कार्यको क्रममा पछ्याए जबदेखि उनी कोचिंगमा कोही थिएनन्।
यो क्वेक सेतीन पारिवारिक फोटोले उनी मायालु बुबा हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्दछ। क्रेडिट: Picuki
क्विन्क र तिनकी श्रीमतीले एक पटक उनकी प्रेमिका पाउला गोमेजसँग लरोको सम्बन्धलाई अनुमोदन गरे। तल चित्रित, दुबै पक्षहरू उनको प्रत्येकको आत्मविश्वासले फ्यान छोड्दा प्रशंसकले विवाह पनी औपचारिक कदम हुनसक्दछ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन।
लारोसँग उनको सम्बन्ध आफ्ना आमा बुबाले अनुमोदित गरेको थियो
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - जीवन शैली
क्वेक सेतीन 'जीवनशैली तथ्या .्कहरू चिन्नु भनेको तपाईंलाई उसको जीवनस्तरको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरू गर्दै, क्वेक सेटीन एक संगठित जीवन बाँचिरहेको छ, जुन असंगत खर्च र घरको रूपमा ठूलो मेगा हवेलीको स्वामित्वमा रहित हो।
क्वेक सेटीनको स्फूर्तिदायी नम्र जीवनशैलीलाई तलको फोटोमा संक्षेप गर्न सकिन्छ। उनको मनपर्ने स्पेनी स्टाइल सेतो बीन, काले र Chorizo ​​(वा लसुन) सूप खाँदा ऊ आफ्नो घरको फोटोग्राफमा थियो। Sequen Setien की पत्नी (रोजा मञ्जनेरा) साथै उनीसँग स्पेनिस टोर्टिलाहरू पनि खुवाउँदछ जुन उसलाई धेरै माया छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… Setien एक नम्र जीवनशैलीको जीवन बिताउँछ र यस जस्तो परम्परागत स्पेनिश पक्राइ मनपराउँदछ
अझै क्विक सेटीनको जीवनशैलीको छानबिन गर्दैछ, तपाइँ फुटबल म्यानेजरले ड्राइभ गरेको कारलाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। बेटिसमा हुँदा क्विक सेटीनले अल्फा रोमियो कार निर्माणकर्ताहरूलाई क्लबमा स्वागत गरे। खेलाडीहरूले उचित छूटका लागि कारहरू छान्दा, ऊ आफैंको लागि पनि थियो। तल अल्फा रोमियोसँग काम गर्ने नम्र फुटबल प्रबन्धक हो जसले आफ्नो कारको परीक्षण-ड्राइभ गर्‍यो।
क्विक सेटीन कार- उनी अल्फा रोमियोको लागि ठूलो प्रेम छ। क्रेडिट्स: एट्लान्टिक
क्विक सेतीन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - अन्य तथ्यहरू
फुटबल स्कूल: ऊ धेरै फुटबल खेलाडीहरु जस्तै एक फुटबल स्कूल को मालिक छ। सबैलाई धन्यवाद क्वेक सेटीनकी श्रीमती, स्पेनिश म्यानेजरले उनको फुटबल स्कूल उनको गाउँमा अवस्थित गर्ने निर्णय गरे। तल चित्रित (र उसको व्यक्तिगत जीवन सेक्सनमा), उनी प्रशिक्षणको लागि संलग्न हुन र आफ्ना बच्चाहरूलाई सुधार गर्ने काममा रुचि राख्छन् एक बुबा आंकडा।
क्विक सेटीन एक फुटबल स्कूलको स्वामित्वमा छ र साना बच्चाहरूको लागि बुबा फिगर, दोस्रो अभिभावक र परिवारको रूपमा सेवा गर्दछन्। क्रेडिट: ट्विटर
तेस्रो क्यान्टाब्रियन कोच प्रशिक्षक एफसी बार्सिलोना: एफसी बार्काको वेबसाइटका अनुसार सेतिन बरसको इतिहासमा तेस्रो क्यान्टाब्रियन कोच हुन्, पूर्व व्यवस्थापकहरूको पछि; एन्रिक ओरिजाओला (नियुक्त १ 1961 XNUMX१) र लॉरेनो रुइज (नियुक्त १ 1976 XNUMX appointed)। नयाँ सहस्राब्दी पछि पक्कै उनी पहिलो हुन्।
धर्म: क्विक सेतीन सम्भवतः क्याथोलिक परिवारमा हुर्केका हुन सक्छन्, जसको अर्थ हो कि उसले इसाई धर्मको अभ्यास गर्दछ। अब यस तथ्यलाई बारे यो बुट्रेसको बारेमा तथ्य छ। यस अनुसार स्याट्यानडरट्रेड वेबसाइट, शहर जहाँ क्विक सेटीनको परिवार आएका थिए क्याथोलिक% 77% (50०% अभ्यास गर्दै) मिलेर बनेको छ। जबकि मुस्लिम र प्रोटेस्टेन्ट%% छन्, अविश्वासीहरु १%% छन्। तसर्थ, यो सम्भवतः क्वेक सेटीनकी श्रीमती आफैं पनि क्याथोलिक चर्चमा उपस्थित हुन सक्छ।
ट्याटू: ट्याटू संस्कृति धेरै जसो फुटबल खेलाडीहरू र कम व्यवस्थापकहरूको बीचमा धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो अक्सर कसैको धर्म वा आफूले मन परेको मानिसहरूलाई चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। क्विक सेटीन ती प्रबन्धकहरू मध्ये एक हो जो ट्याटु-मुक्त हुन रुचाउँछन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Quique Setien बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।